Myanmar Local News: ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ၌ အဓိကကဏ္ဍမှ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပါဝင်ခဲ့ဟုဆို
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ၌ အဓိကကဏ္ဍမှ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပါဝင်ခဲ့ဟုဆို
ကိုမျိုးဆက် နဲ့ စကားစမြည်ပြောမိရာ ကနေ အရေး အခင်းတွေ ရဲ့သဘောသဘာဝတွေ အကြောင်း စတေးတပ်စ် တစ်ခုရေးမယ်လို့လွှတ်ကနဲ နူတ်က ထွက်သွားမိပါတယ်
တကယ်တော့ ဒါတွေ သိပ်မရေးချင်လှပါဘူး ကိုယ့် နိူင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရ လက်တွေ့ အသုံး ချလို့ ရတဲ့တိုင်းပြည်ကို အထူးတလည် ဒုက္ခပေးနိူင် တဲ့နည်းစနစ်တွေ ဖြစ်နေလို့ ပါ
ဒါကြောင့် … အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းနည်းစနစ် အချက်အလက် တွေကို ချန်လှပ်ခဲ့ပြီး အရေးအခင်းတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို ဖော်ပြနိူင်လောက်ရုံပဲ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ စတေးတပ်စ် ကို ရေးပါတယ်
အသေးစိတ် မရေးသားတဲ့ အတွက် မပြည့်စုံတဲ့ အတွက် ဖတ်ရတာ ဟာတာတာ ဖြစ်နေရင် ဖတ်ရူသူများ အနေနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ဖို့ကြိုတောင်းပန်လိုပါတယ်
မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် လူထုတိုက်ပွဲ နည်းလမ်းကို အကျွမ်းကျင် အပိုင်နိူင်ဆုံးဟာ ဗကပ ( ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ) လို့ ပဲ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
၁၉၈၈ ခုနှစ်အရေးအခင်း ကို အဓိက ကြိုးကိုင်သွားတဲ့ဦးသက်ခိုင် နဲ့ဦးတင်အောင် တို့ ရဲ့လုပ်ဆောင် ချက်တွေဟာ အထူးတလည် ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အတွက် အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ အနေနဲ့နူတ်ကနေ အထင်တကြီး ထုတ်ဖော်ချီးကျူးခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကို ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်
သူတို့ ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ဟာ ဘယ်လောက် ကောင်းမွန် တိကျသလဲဆိုရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်းမဖြစ်မီ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကတည်းက နောက် ၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည်မှာ လူထုအုံကြွမှု တစ်ခု ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ကြိုတင် ခန့် မှန်းသုံးသပ် နိူင်ခဲ့ပြီး ဗကပ ဗဟိုကော်မတီ ကို အစီရင်ခံစာ တင်ပြခဲ့တဲ့ အနေအထားထိ ရောက်ရှိ ခဲ့ဖူးပါတယ်
ဗကပ ဗဟိုကော်မတီ ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ အရေးအခင်း စဖြစ်တာနဲ့အရေးအခင်းအတွင်း လူထုတိုက်ပွဲ နည်းနဲ့နေရာဝင်ယူနိူင်ဖို့၁၉၈၆ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ပြီး ပြင်ဆင် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ လဲ စစ်ကြောချက်များအရ သိရှိရပါတယ်
ဦးသက်ခိုင်တို့ ရဲ့၄၈၂၈ ဒေသပါတီ ကော်မတီ ယူဂျီ အဖွဲ့အဓိက ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရတဲ့ ပြသနာကတော့ အမျိုးသား ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ က ၁၉၈၇ ဇန်န၀ါရီ လမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စွန်ရဲ စစ်ဆင်ရေးပါပဲ
ဒီစစ်ဆင်ရေးမှာ ယူဂျီကွန်ယက် ထဲက ဂိုဏ်းထောက် အဆင့်ရှိသူ ၁၃ ဦးကို ဖမ်းမိသွားတဲ့ အတွက် ယူဂျီအဖွဲ့ ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ ခဏ ရပ်တန့် ခဲ့ရပါတယ် ထောက်လှမ်းရေး သုံးသပ်ချက်တွေအရတော့ စွန်ရဲ စစ်ဆင်ရေး မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ ရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးအခင်းဟာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ခန့် မှန်းသုံးသပ်ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်
ဦးသက်ခိုင်တို့ ယူဂျီအဖွဲ့ ကို ၁၉၈၉ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ မှာမှ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး က ဖမ်းဆီး နိူင်ခဲ့ ပါတယ် ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ အနေနဲ့ဦးသက်ခိုင်တို့ယူဂျီကွန်ယက်အပေါ် ဘယ်လောက် အစိုးရိမ်ကြီး ခဲ့လဲ ဆိုရင် ၁၉၉၄ ၀န်းကျင် ( ခုနှစ်မသေချာ ) ဦးသက်ခိုင် အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ချိန်မှာ လက်ထိပ် မဖြုတ်ပေးရဲတဲ့ အတွက် ဆရာဝန်များနှင့် အချင်းများရတဲ့ အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ်
အစိုးရ အနေနဲ့ဒီလောက်တောင် အစိုးရိမ်ကြီးရတဲ့လူထု တိုက်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးလာရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
လူထုတိုက်ပွဲ ဆိုတာဟာ လူအုပ်စု (Mob)ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရည်မှန်းချက် အခြေအနေကို ရောက်လာအောင် ပြုလုပ်တဲ့တိုက်ပွဲ နည်းနာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
လူထုတိုက်ပွဲ နည်းနာကို ပထမဆုံး မဟာဗျူဟာမြောက် ချမှတ်အသုံးပြုခဲ့တာဟာ ၁၉၂၈ ခြောက်ကြိမ် မြောက် ကမ္ဘာ့ ကူမင်တန် ကွန်ဂရက် မှာ ဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီကွန်ဂရက်မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို သပိတ်မှောက်ခြင်း ( Strike ) နဲ့ဆန္ဒပြခြင်း ( Demonstration )တို့ ကို အချိန်ကိုက်ပေါင်းစပ်ပြီး လူထုဆူပူမှုကို ဖြစ်ပေါ် ဖန်တီးစေရမည် ထိုမှတစ်ဆင့် လက်နက်စွဲကိုင် ဆန္ဒပြမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ နောက်ဆုံးတွင် အထွေထွေသပိတ်ကြီးကို လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်မှုနှင့် ဟန်ချက်ညီ ဆင်နွဲပြီး အာဏာကိုသိမ်းယူရမည် လို့လမ်းညွှန် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်
၀ါရင်းရောဂျားစ်( Warren Rogers) ဟာ နယူးရော့ဒ်ဟဲရော့ဒ် သတင်းစာမှ သတင်းထောက်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၀ တိုကျို အဓိကရုဏ်းမှာ ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားတွေနဲ့၅ နာရီလောက် အတူရှိနေခဲ့တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်
ဆန္ဒပြနေတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ နုနုငယ်ငယ် လူငယ်လေးတွေ ဖြစ်ပြီး အင်မတန် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ညနေပိုင်းရောက်ချိန်မှာတော့ နိူင်ငံရေး ပယောဂတွေ စတင်ပူးကပ်လို့ လာပါတယ် အလံတွေ နဖူးစည်းတွေ စရောက်လာပါတယ် မီးတုတ်တွေကိုလဲ ထွန်းညှိလိုက်ပါတယ် အဆိုး ဆုံးက ဂျပန် ဗုံတိုတွေပါပဲ စည်းချက်ညီညီ အချက်ကျကျ တီးနေတဲ့ ဗုံသံတွေအောက်မှာ ကျောင်းသား လူငယ် နုနုနယ်နယ်လေး တွေဟာ သရဲမရဲ စီးကုန်ကြပါတယ်
မူလပထမ ကြွေးကြော်သံ ဖြစ်တဲ့" အမ်-ပို-ဟန်-တိုင်း " ( ဂျပန်-အမေရိကန် စာချုပ် ပျက်စီးပါစေ ) အစား ၀န်ကြီးချုပ် ကီရှီ ကျဆုံးပါစေ ဒိုင်းယက် လွှတ်တော် ဖျက်သိမ်းပြစ် စတဲ့နိူင်ငံရေးကြွေးကြော်သံတွေကို ပြောင်းလဲသွားပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဒိုင်းယက်လွှတ်တော်ကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်တော့တဲ့ အတွက် သွေးမြေကျ ကုန်ရပါတော့တယ် …လို့ဝါရင်းရောဂျားစ် က ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်
Dr.J.M. Meerloo ( လူစုလူဝေး စိတ်ပညာ ပါရဂူ ) ရဲ့အဆိုအရတော့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအပေါ် မြင်တွေ့ သူအပေါင်း စိတ်လှုပ်ရှားကာ ပါဝင်လာအောင် ပြုလုပ်တဲ့ နည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ အနက်က
( ဥပမာ နဖူးစည်းစီးခြင်း ၊ ဗုံများတီးခြင်း )
စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွဖွယ် အပြုအမှုများ
( ဥပမာ - ပန်းခွေချခြင်း ၊ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင် စိုက်ထူခြင်း ၊ လူအုပ်စုဖြင့် အလေးပြုခြင်း )
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ မျက်နှာဖုံးစွပ်များ စည်းခြင်း
ဘ၀ဂ်ညံစေသည့် သံပြိုင်ကြွေးကြော်သံများ ကြွေးကြော်ခြင်း ….
စတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ အသုံးများပြီး လူအုပ်စုကို ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့ သွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်
မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာ့ အရေးအခင်းတွေကို လေ့လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းစနစ်တွေအတိုင်း အဆင့်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်တာကို လေ့လာတွေ့ ရှိရပါတယ်
(က) လူအုပ်စု ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးခြင်း
၁။ ကြိုတင်အခြေအနေဖွင့် အကွက်ဆင်ခြင်း
ဒီအဆင့်မှာ …. ယူဂျီ ဆဲလ်တွေဟာ လူတန်းစားအသီးသီး အလွှာအသီးသီး အဖွဲ့ အသီးသီးမှာ ၀င်ရောက် နေရာယူရပါတယ် အစိုးရကို မုန်းတီးလာအောင် အစိုးရရဲ့ မူဝါဒ ၊ လုပ်ငန်းတွေကို ဆန့် ကျင်လာအောင် ၀ါဒဖြန့် ချိရပါတယ်
အဓိက လုပ်ဆောင်တာကတော့ ဘုံရန်သူကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး အစိုးရလုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက လူထုအကျိုး နဲ့ဆန့် ကျင်သယောင် ရှိတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး အစိုးရ မုန်းတီးစိတ်ကို ထပ်တ လဲလဲ သွင်းပေးပါတယ် အစိုးရ ကို အပုတ်ချတဲ့ကောလာဟလ အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လွှင့်ပေးပြီး မုန်းတီး စိတ်ကို အရှိန်မြှင့်တင် စေပါတယ်
ဒီလိုလှုံ့ ဆော်ရာမှာ လူအုပ်စု အမျိုးအစားနဲ့ သဘောသဘာဝပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ကွာခြားပါတယ် ကျောင်းသားအုပ်စုကို လှုံ့ ဆော်ရာမှာ အရပ်သား အုပ်စုထက် ပိုမို လွယ်ကူပြီး အလုပ် လက်မဲ့ အုပ်စုဟာ လှုံ့ ဆော်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်တယ်လို့သုတေသန စစ်တမ်းတွေအရ တွေ့ ရှိရပါတယ်
လိုအပ်တဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုအထိ ဒီအဆင့် ကို လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ လူထုဟာ အခြေအနေကို စဖောက်ခွဲလိုက်တာနဲ့ပေါက်ကွဲဖို့ အတွက် အသင့် ဖြစ်နေပါပြီ
၂။ လူအုပ်စု ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးခြင်း
ဒီအဆင့်မှာတော့ သာမန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို စနစ်တံ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ဖောက်ခွဲဖို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ် ဥပမာ…၁၉၈၈ အရေးအခင်းမှာ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေ နဲ့ အရပ်သားလူငယ်တစ်ချို့ကက်ဆက်တိတ်ခွေ ဖွင့်ခိုင်းရာက စကားများ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် ပြသနာဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုင်းအတွင်း ပြသနာကို ကြီးကျယ်လာအောင် တမင်ဖန်တီးပြီး အခြေအနေကို ဖောက်ခွဲရပါတယ်
(ခ) လူအုပ်စုကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်း
၁။ လူစုလူဝေးအား လှုံ့ ဆော်ခြင်း
ဒီအဆင့်မှာတော့ မူလပထမ ရှိနှင့်ပြီးသား လူတွေအပြင် တစ်ခုခုဆို ပြေးကြည့်တတ်သောသူများ ကြိုတင် ၀ါဒဖြန့် ချိထားခြင်းကြောင့် အစိုးရကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေသူများ အခြားပြည်သူအများစုပါ ပါဝင်လာအောင် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်
အရေးအခင်း အားလုံးရဲ့ အစဟာ ဘုံကြွေးကြော်သံ နဲ့ စတင်ပါတယ်…
ဥပမာ လူအားလုံး နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကုန်ဈေးနူန်း ကျဆင်းရေး လစာ တိုးပေးရေး စက်သုံးဆီ ဈေးနူန်းလျော့ချရေး ….စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်
လူအားလုံးပါဝင် သွေးဆူလာပြီ ဆိုမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကြွေးကြော်သံကို .. တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲ ယူတာမျိုးကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်
၂။ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်စေခြင်း
လူအုပ်စုကို စတင် အကြမ်းဖက်အောင် ပြုလုပ်တာပါ လူထုရဲ့ မကျေနပ်ချက် အခံရှိနေတဲ့နေရာဒေသ အဆောက်အဦးတွေကို (ဥပမာ ရဲစခန်း ၊ သမဆိုင်) လူအုပ်အတွင်းက ဆဲလ်တွေက စတင်တိုက်ခိုက်ပြီး လူအုပ်ကို အကြမ်းဖက်စေပါတယ်
အရေးအခင်းကို အရှိန်မြှင့်ဖို့ ထပ်လိုအပ်လာရင် အာဇာနည် ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖန်တီးခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုကို ထပ်ထည့်ပါတယ် သွေးမြေကျမှုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် စီစဉ်တာမျိုးပါ
အဲလို ကိစ္စမျိုး ဖြစ်လာတာနဲ့ငါတို့ ရဲဘော်တစ်ယောက် အသေခံသွားပြီ တို့ တစ်တွေ သူ့ ကို သစ္စာမဖောက်သင့်ဘူး နောက်မဆုတ်စတမ်းကွ…စသဖြင့် လူအုပ်ကို မဲမဲ မြင်ရာတိုက်ခိုက်လာတဲ့ အခြေ အနေမျိုးအထိ လှုံ့ ဆော် လေ့ရှိပါတယ်
၁၉၆၀ မက္ကဆီကို အဓိကရုဏ်းတစ်ခုမှာ ကျောင်းသားတစ်ဦး သေနတ်မှန် သေဆုံးသွားတဲ့ အတွက် လူအုပ်ဟာ တစ်မြို့ လုံးကို အပြင်းအထန် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် ပါတော့တယ်
နောက်ဆုံးမှာ မက္ကဆီကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က သေဆုံးသူရဲ့ အလောင်းကို မရအရ လုယူပြီး ခွဲစိတ်စစ်ဆေးချိန်မှာ အလောင်းထဲကတွေ့ ရတဲ့ ကျည်ဆန်ဟာ မက္ကဆီကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က မသုံးတဲ့ ကျည်ဆန်မျိုး ဖြစ်နေတာကို စိစစ် တွေ့ ရှိခဲ့ ရဘူးပါတယ်
၃။ လူအုပ်စုကို ကွပ်ကဲခြင်း
တကယ့် ကွပ်ကဲမှု ခေါင်းဆောင်တွေဟာ လူအုပ်ထဲမှာ မရှိပဲ အပြင် မှာပဲ ရှိနေပြီး လက်ထောက် တွေ ကတော့ လူအုပ်စု ရဲ့ အတွင်းက လိုက်ပါလေ့ရှိပါတယ်
များသောအားဖြင့် လူအုပ်ထဲမှာ မြင်သာတဲ့အလံကိုင်ရဲ့ ဘေးနားမှာ ရှိနေတတ်ပြီး လူအုပ်ရဲ့ အပြင်က လိုက်လာတဲ့ဆက်သားတွေကတစ်ဆင့် ကွပ်ကဲမှု နဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်လေ့ရှိပါတယ် ကွပ်ကဲမှုဟာ လမ်းပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ နေရာတွေ အတားအဆီးတွေ လုံခြုံရေးတပ်များရဲ့ တည်နေရာကို လူအုပ်တွင်းက ခေါင်းဆောင်ကို သတင်းပေးပို့ နေပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာအထိ အရောက်ချီတက်နိူင်အောင် ပံ့ ပိုးကူညီ ပါတယ်
လုံခြုံရေး အဖွဲ့ တွေကလဲ လူအုပ်အပြင်မှာပဲ ရှိနေတတ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့လူအုပ်ထိပ်တိုက်တွေ့ တာနဲ့လူအုပ် တွင်းက ခေါင်းဆောင်တွေ အဖမ်းမခံရဖို့ အတွက် ကာကွယ် အကူအညီ ပေးလေ့ရှိပါတယ်
အလံကိုင် အများစုကတော့ များသောအားဖြင့် ဘုမသိဘမသိ ရိုးသားတဲ့ သာမန် ပြည်သူတွေသာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်
ဒါဟာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လူထုတိုက်ပွဲ အကြောင်းကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့အကျဉ်းချုံး ဖော်ပြခြင်း ဖြစ် ပါတယ် ဒီလိုဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ လူထုတိုက်ပွဲကို ဖြိုခွဲတဲ့တန်ပြန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ချန်လှပ်ထား ခဲ့ပါတယ်
မပြောမဖြစ် ပြောရမှာတစ်ခုကတော့ လူထုတိုက်ပွဲတွေကို အပြီးသတ် ရပ်တန့် စေဖို့ ဆိုတာ ကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့ နဲ့လှုံ့ ဆော်နေတဲ့ ကွန်ယက်ထဲက ဆဲလ်တွေကို မထိန်းသိမ်းနိူင်သရွေ့ဘယ်လိုမှ မရပ်တန့် သွားပဲ ထပ် တလဲလဲ ထပ် ဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ်
ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ တွေဟာ ဘာကြောင့် အရေးအခင်းတွေမှာ လူအုပ်ထဲ မပါဝင်တဲ့ သူတစ်ချို့ ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရ သလဲဆိုတာ စဉ်းစားနိူင်ဖို့ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
၂၀၀၇ ခုနှစ်တုန်းက ကွပ်ကဲမှု နေရာဖြစ်တဲ့တောင်ဥက္ကလာ ငွေကြာရံ ကျောင်းတိုက်ကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ လဲ ဥပမာပြု ချိန်ထိုး စဉ်းစားနိူင်ပါတယ်
ဒီ စတေးတပ်စ် အဓိက ရေးရတဲ့ အကြောင်းကတော့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ လူထုတိုက်ပွဲ ရဲ့နည်းစနစ် တွေအောက်မှာ သိမ်းသွင်းလှုံ့ ဆော်ခံရပြီး နိူင်ငံရေးသမား တွေရဲ့သားကောင်မဖြစ်စေဖို့ဗဟုသုတ ရှိစေ ခြင်း အလို့ ဌာ ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။